कसरी सम्भव भयो भारतीय खसीबोका आयातमा प्रतिबन्ध ? यस्ताे छ कारण | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कसरी सम्भव भयो भारतीय खसीबोका आयातमा प्रतिबन्ध ? यस्ताे छ कारण
साउन ३ गते, २०७६ - १२:३५
काठमाडौं । गत चैत्रदेखि भारतीय खसीबोकाको आयात रोकिएको छ । सरकारले खसीबोका आयातमा क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र पेस गर्न अनिवार्य गरेपछि खसीबोका आयात बन्द भएको हो ।
पशु सेवा विभागले गत फागुनमा सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टिनलाई पशु स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र पेस नगरेसम्म आयात अनुमति नदिन निर्देशन गरेको छ । क्वारेन्टिन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै भारतीय खसीबोका आयात रोकिएको हो । क्वारेन्टिन ऐनमा आयातकर्ताले सम्बन्धित मुलुकबाट आयात हुने पशु स्वस्थ्य भएको प्रमाण–पत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपालमा वार्षिक ४० लाख हाराहारी खसीबोका खपत हुन्छ। राजधानीमा खपत हुने खसीबोकाको करिब ७५ प्रतिशत आयात भारतबाट मात्रै हुने गरेको बताईन्छ । भारतबाट वार्षिक चार लाखभन्दा बढि खसीबोका आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
सरकारले आयात रोकेसँगै मासुको मुल्य भने महँगिएको छ । आयात रोकिएसँगै नेपाली बजारमा प्रतिकिलो हजारदेखि एक हजार ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको खसीको मासुलाई अहिले ११ सय ५० देखि १२ सय रुपैयाँ पर्छ।
नेपालगन्जको रुपैडिहा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, भैरहवा–सुनौली नाकाबाट धेरै खसीबोका आयात हुन गर्दथ्यो ।
विदेशबाट रोगी, मरेका खसीबोकासमेत आयात हुने गरेको भन्दै उपभोक्ता गुनासो गर्दै आएका थिए । भारतीय खसीबोका आयात बन्द भएसँगै नेपाली कृषकलाई भने फाईदा भएको छ । राम्रो बजार मुल्य नपाउनु र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेका बेला भारतीय खसीबोका आयात रोकिएसँगै नेपाली खसीबोकाले बजार पाएका हुन् ।
साउन ३ गते, २०७६ - १२:३५ मा प्रकाशित